Driver akatanga kundiisa zvine speed ndikawona afinyamisa kumeso ndiye aah aaah tsaaa tsaaa! | Nhau Dzevakuru
Home Nhau DzeBonde Driver akatanga kundiisa zvine speed ndikawona afinyamisa kumeso ndiye aah aaah tsaaa...
Ndainge ndagarisa ndisina kusvirwa saka ndakapinda mune imwe combi yaibva kuHarare ndichiyenda kuKwekwe, ndainge ndakagara kufront zvangu apa ndakarova hangu mapants ayiratidza beche kuzvimba. Chemusi uyu ndaida kungosvirwa chete ndainge ndisina basa rekuti ndiani, beche rangu rainge ratozvimba ndainge ndakarohwa nenyere musi uyu masasi mboro yaishota.
At one point ndakanzwa beche richiita kunyerekedza kunge pane masvosve apa ndainzwa kuvhita vhita mukati ndokubva ndabata ndatokanganwa kuti ndiri mukombi, driver akazviwona ndokubva ati aah aaah urikuitei. Ndakamuudza kuti sha ndanzwa izvozvi ndirikuda mboro but ndairatidza nechigunwe ndichibaya baya beche rangu, akatanga kunyara but inini nezvandainge ndakunzwa ipapo ndakamuti saka unogona kuwana zvekuita here.
Kombi yainge yasara nevanhu 2 chete tiri muChegutu vaisara Kadoma, ndakawona driver akungorova mota asingatsvage vanhu ndikaziva kuti zvangu zvaita, nhasi ndinoiswa chete. Ndakatanga kumubata bata mboro tisati tasvika Kadoma ndikanzwa aaahhh zimboro rainge ratowoma apa painge pasina kana 2 mins ndatanga kumubata ndofunga akamisa just after andiwona ndichitamba nebeche rangu.Ndakavhura zip ndiburitsa mboro zvishoma vanhu vasingawone aaah masasi rainge rakareba apa rakachecheudzwa zvekuti ndainge ndichida iri nyoro chaiyo but munogoziva first time inonetsa.
Takasvika muKadoma vanhu vachibva vaburutswa ndokubva tasara tiri two, ndakanyatsoibata nemawoko two ndokubva ndaiyisa mumuromo ndokutanga kutambisa rurimi rwangu pamusoro wemboro ndikanzwa munhu akungoti yuwi maihwee kani wandidarirei kani. Mota yakabva yamiswa pachisango so ndokubva adzima zvake akaburuka neni ndokubva ayenda neni kuback kwecombi, driver ainge apera kare chaingoda kusvira chete and ininiwo chandaida kusvirwa zvekuti ndakatanga ndafongoreswa musoro uri mukati ndokubviswa kabhurugwa ndokuinzi pfeee, masasi ndakaridza mhere coz ndakanzwa kubaiwa pachibereko chaipo mukati kati mark beche.
Driver akatanga kundisvira achiita semunhu arikupomba apa masounds ayibuda pabeche racho nekutota kwarainge raiita wainzwa kunge munhu arikutamba chamunyurududu. Mboro yaiusingazive inonake veduwe, ndakazorohwa futi ndakatarisa mudenga ndikawona munhu akuita kufinyamisa kumeso ndinzwe aahahh aaahhh tsaaa tsaaa tsaaa tsaaa tsaaa huronyo hwese hichidurirwa mucondom apa rainge riritete zvekuti ndakafunga kuti pamwe ndarohwa nyoro asi maya kwaingova kugona kukoira chete. Painge pakutunda driver akatanga kusvira zvine speed, apa ndainge ndatunda pamwe ka 3 chaiko. Ndakasvirwa zvandisingakanganwe kana nanhasi hapana murume anosvira sadriver iyeye.
Manheru ndakaiswa hama woye ndikatunda 4 times!
Ndakavaisa vari two ndichivachinjanisa!
Previous articleManheru ndakaiswa hama woye ndikatunda 4 times!
Next articleNdakainangisa pakati pemakumbo ndakamutakura ndokubva ndaiti shweee, akabva ashinyira!